Maraykanka oo ku baaqay in hogaamiyaha mucaaradka Nasa aanan la dhaarinin
Dowlada Maraykanka ayaa hogaamiyaha urur weynaha mucaaradka Nasa Raila Odinga u soo jeedisay inuu meesha ka saaro qorshaha la doonayo in 12-ka bishan loogu dhaariyo hogaanka dalka.
Gacan yaraha ku xigeenka xoghayaha guud ee dowlada maraykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Donald Yamamoto ayaa ka digay qorshaha mucaaradka oo uu ku tilmaamay mid keeni karo xasarad siyaasadeed oo aanan loo baahneyn.
Hadalkan ayuu jeediyay xili uu kulan la qaatay madax sar sare ee Nasa sida Raila Mr Odinga, Musalia Mudavadi, Moses Wetang’ula iyo gudoomiyaha ismaamulka Makueni Kivutha Kibwana oo matalayay Kalonzo Musyoka oo weli ku maqan dalka dibadiisa.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in sarkaalkan uu sheegay inuu ka shaqeynayo sidii madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha garabka mucaaradka ee dalka Raila Odinga ay u wada hadli lahayeen.
28-kii bishii hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa Willaim Ruto markii labaad loo dhaariyay qabashada hogaanka dalka .
Hasa ahaate garabka mucaaradka dalka ee Nasa oo sheegay inaysan Uhuru u aqoonsaneyn inuu yahay hogaamiye si cadaalad ah ku soo baxay ayaa ka biya diiday dhaarintiisa waxayna wacad ku mareen in Raila Odinga ay isna dhaarin doonaan.
← Maamulayaasha dugsiyada sare iyo ku xigeenadooda oo laga doonayo inay haystaan shahaadada Masters
Madaxweynaha Maraykanka oo maanta la filayo inuu Quddus u aqoonsado caasimada Israaiil →